Soomaalida Göteborg oo sameeyey baroor-diiqyo kala duwan iyagoon mideeysneyn | Somaliska
Labadii maalin ee ugu dambeeysay waxaa magaalada Göteborg meelo kala duwan lugu qabtay munaasabado baroordiiq ah oo loo sameeynayo dadkii ku wax yeeloobay qaraxii ka dhacay bartamaha magaaladda Muqdisho toddobaad ka hor.
Baroordiiqdan oo ay soo qaabin qaabiyeen qeybaha kala duwan ee bulshadda soomaalida, ayaa wuxuu ahaa mid iyagoo aan mid aheyn ay qolo walba meesha ku qabatay munaasbad baroorqiiq ah. Maalintii jimicihii ayaa waxaa hoolka Blåstället lugu qabtay baroordiiq socday labbo saacadood oo uu soo qaban qaabiyey mid kamid ah urruradda Göteborg ka jira.
Isla habeenimadii sabtida soo galeeysayna waxaa urrur dhalinyarro ay ku qabteen munaasabad la mid ah tan aan soo xusnay. Sidaasi si lamid ahna ayaa waxaa masaajidka soomaalida maamusho ay culimadda ku qabteen kulan baroordiiq ah oo loogu duceeynayey dadkii ku dhintay qaraxii ka dhacay isgooyska Zoobe ee magaaladda Muqdisho.
Baroordiiq lugu qabtay xarrunta Kortedala Forum ee Göteborg. Waxaa soo qaban qaabiyey urrur dhalinayrro. Sawirka: Somaliska.com
Dhinaca kale banaanbaxan ay dadweyno badan iskugu yimdaan ayaa waxaa lugu qabtay bartamaha magaaladda Göteborg. Banaanbaxan ayaa waxaa soo qaban qaabiyey mid ka mid ah urruuradda soomaalida ee Göteborg ka jira. Inkastoo dadkweynihii halkaa iskugu yimid ay ahaayeen dad ay ka muuqatay murug iyo xamaasad ay ku doonayaan ineey taageero u fudiyaan dadkii ku wax yeeloobay qaraxii ka dhacay isgeeyska Zoobe.
Haddana waxaa laga dheehan karay sida aaneey siyaasiinta gobolka ee ka tirsan xisbiyadda siyaasadeed iyo maamulka gobolka uga qeyb qaadan, taa marka laga soo tagana cid kasta waxaa u muuqatay sida ay soomaalidu u kala socoto xitaa marka ay timaado arrin si guud u wada saameeyneysa.
Banaanbax baroorqiiq ah oo lugu qabtay bartamaha magaaladda Göteborg. Waxaa soo qaban qabiyey urrurka Neutrala Ungdoms Förening ee Göteborg. Sawirka: Somaliska.
Shabakadda Somaliska oo intii banaanbaxa socday la hadashay qaar ka tirsan dadkii banaanbaxayey ayaa sheegay ineey ku faraxsan yihiin siddeey dareenkooda u muujiyeen misna ay ka xun yihiin kala qeybsanaanta soomaalida. Ugu dambeyntiina toddobaadka soo socda ayaa xaafadda Hisingen waxaa lugu qabanayaa barnaamij dhaqaale loogu arruurinayo dhibanayaashii dhibaatada ka soo gaartay qaraxii Soobe, jawaabna u ah baaqii gurmad Qaran.
Laanta socdaalka oo hakiday xeryo qaxooti oo horey uga furtay gobolka Falun